Eto ianao : Home>orinasa
Ny Matic Express dia manana foibe any Shenzhen, Sina, misy biraon'ny sampana any Changsha, Sina. Amin'ny maha-logiciel iraisam-pirenena matihanina sy mpanome serivisy fandefasana entana, manana traikefa 10 taona mahery amin'ny serivisy fitaterana an-dranomasina sy an-dranomasina izahay. Izahay dia miasa amin'ny serivisy fitaterana iraisampirenena, ao anatin'izany ny zotram-pitaterana an-dranomasina, ny entan'ny ranomasina, ny zotram-pitaterana an-dalambe, ny serivisy fanambaràna, ny fitehirizana entana, ny fadin-tseranana, sns.. amin'ny maha-iraka ifotony azy, manavao tsy tapaka ary miezaka mitondra fahafaha-manao bebe kokoa ho an'ireo mpiara-miasa amintsika.
Tsy misy afaka manao irery ny asa rehetra, ny fiaraha-miasa tonga lafatra dia mitondra antsika any amin'ny tohatra avo kokoa. Ny mpiasa tsirairay dia loharano tena ilaina sy sarobidy ho an'ny Matic Express, ary maro amin'izy ireo no niaraka taminay hatramin'ny andro voalohany nananganana ilay orinasa. Ny ankabeazan'ny mpikambana ao amin'ny ekipa dia manam-pahaizana manana traikefa amin'ny logistika mihoatra ny folo taona, mahazatra ny fizotran'ny fitahirizana entana, ny fitaterana, ny fahazoan-dàlana amin'ny fadin-tseranana, sns. ahenao hatramin'ny farany ny vidin'ny lozisialy ho an'ny mpanjifanay.
Matic Express dia manana trano fanatobiana entana any Shenzhen, Sina ary Los Angeles, Etazonia, izay miorina amin'ny paikady. Mandritra izany fotoana izany dia mitantana entana entana miditra sy mivoaka amin'ny alàlan'ny rafitra fitantanana trano fitobiana izahay hanatsarana ny fahombiazan'ny fandefasana entana. Manana fiaraha-miasa maharitra sy maharitra amin'ireo orinasam-pitaterana malaza marobe (oh: Evergreen, Star Line, Mason, Maersk, ONE) ary ny seranam-piaramanidina (oh: China Southern, Air China, Sichuan Airlines, Xiamen Airlines, EK, Cathay Pacific) hisolo tena ny maro zotra sy loharanom-pivarotan-trano, mba hahafahanay miantoka ny haben'ny trano fitehirizana, ny fotoanany ary ny vidiny, na inona na inona vanim-potoana ambany sy avo.
3. Serivisy fijanonana tokana
Tsy vitan'ny mpiara-miasa lozisialy ianao, fa koa mpiara-miasa aminao any Shina. Tsy ny Matic Express ihany no ananantsika, fa koa nanangana ny Matic Media sy ny Matic IOT, koa tsy ny logistika sy ny fitaterana ihany koa, fa manome serivisy fanampiny miampy sanda, avy amin'ny famokarana vokatra, fitsapana vokatra, fakana sary, famolavolana logo, fomba amam-panao fahazoan-dàlana sy famerenam-bola amin'ny serivisy Amazon, hanome fiarovana feno ho an'ny orinasanao izahay.
4. Fitomboana mitohy
Ny onjan'ny fotoana dia manosika ny zava-drehetra handroso, ary ny indostrian'ny lozisialy dia hiatrika toe-javatra vaovao sy olana vaovao amin'ny fizotran'ny fampandrosoana. Ho an'ireo orinasam-pitaovana, manoloana ireo fotoana mety hitranga sy fanamby, ny fomba tokana ahafahana mamaly ny filan'ny mpanjifa vaovao dia ny fanajana ny fahazotoana sy ny fanavaozana. Matic Express, mampanantena ny ho avy.
Izahay dia hikarakara ny entanao na ny mpandeha anao ary hanatitra azy ireo soa aman-tsara sy ara-potoana.
Mifandraisa aminay mijery serivisy
Room 11003, Block A, Wanda Plaza, KaifuDistrict, Changsha, Sina